1,2 amin'ireo isaky ny terminal 100 fotsiny no nanavao ny Android 6.0 Marshmallow | Androidsis
Android manana olana, ary io olana io dia antsoina hoe fragmentation. Araka ny navoakan'ny mpamolavola ny rafitra miasa, ankehitriny dia mivezivezy hatramin'ny kinova fito ary ny farany dia natomboka tamin'ny Oktobra lasa teo Android 6.0 Marshmallow, zara raha mahatratra fitaovana roa amin'ny folo.
Android 6.0 Marshmallow dia tsy mamita ny boot
Sady tsy mifarana no tsy manomboka. Toy ny isam-bolana, nanamboatra vaovao momba ireo kinova samihafa mivezivezy amin'ny takelaka sy finday avo lenta eran'izao tontolo izao ireo mpandrindra Android ary ny valiny, amin'ity indray mitoraka ity, dia nahagaga kokoa noho ny hatramin'izay.
Ny sombintsombiny dia mahatratra kinova fito hafa: Froyo, Gingerbread, Ice Cream Sandwich, Jelly Bean, KitKat, Lollipop ary mazava ho azy, Android 6.0 Marshmallow. Ny vaovao dia namoaka ny tenan'ireo mpamorona Android mihitsy, ka tena azo itokisana.
Araka ireo angon-drakitra ireo, Jelly Bean miaraka amin'ny 23,9%, KitKat misy 35,5% ary Lollipop misy 34,1%, no manjaka ny ambiny, kinova efatra hafa izay lasa vitsy an'isa nefa mbola misy toy ny Ice Cream Sandwich misy 2,5%, Gingerbread miaraka 2,7% ary Froyo miaraka amin'ny 0,1%.
Farany hitantsika ny kinova farany indrindra ary feno vaovao, Android 6.0 Marshmallow, izay na dia nitombo 0,5% aza tao anatin'ny efa-bolana niainany, dia ao anatin'ny 1,2% amin'ireo fitaovana ihany.
Ho famaranana, mihoatra ny antsasaky ny fitaovana Android izay miasa no manao izany amin'ny kinova efa taloha be.
Ny fanontaniana mipetraka dia izao, hoe firy isan-jato no ho tonga Android 6.0 Marshmallow rehefa mahita ny jiro ilay kinova Nutella honohono? Ahoana no fikasan'ny orinasa hamarana an'ity olana manaparitaka izaitsizy ity?
SOURCE | Mpanamboatra tranonkala Android
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Tutorials » Android Version » 1,2 ny terminal fotsiny no nanavao ny Android 100 Marshmallow